Maxkamadda Ciidamada oo toogasho ku fulisay askari horay u dilay Bajaajle | dalkaan.com-Wararka ugu danbeeyay ee soomaaliya
Home Warkii Maxkamadda Ciidamada oo toogasho ku fulisay askari horay u dilay Bajaajle
Maxkamadda Ciidamada oo toogasho ku fulisay askari horay u dilay Bajaajle
Luuq (Dalkaan.com) – Maxkamadda ciidamada Qalabka Sida, qaybta 27-aad ayaa maanta oo Isniin ah xukun dil toogasho ku fulisay askari ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya oo horay qof shacab ah ugu dilay degmada Luuq ee gobolka Gedo.
Sidoo kale xukunka ay fulisay maxkamadda waxaa si aad ah u soo dhoweeyey waalidiinta iyo ehellada wadihii mooto Bajaajlaha ee uu horay u dilay askariga la toogtay.
Horay Maxkamadda Ciidamada ayaa toogasho ugu fulisay askar ka tirsan ciidanka dowlada, waxaaa ugu dambeeyey dilkii lagu fuliyey 22kii bishii hore December, Dable NISA Maxamed Cali Xuseen oo November 2021-kii Degmada Baladxaawo ku dilay labo wiil oo dhalinyaro ah sidoo kalena ka mid ahaa ciyaartoyda degmadaas isagoo ku dilay garoon Kubada Cagta ah.
Real Madrid oo qarka u saaran inay Chelsea ku garaacdo goolhayaha...
Real Madrid ayaa qarka u saaran inay Chelsea ku garaacdo saxiixa goolhayaha Chicago Fire ee Gabriel Slonina . Chelsea ayaa doonaysay inay u saxeexdo Slonina in muddo ah waxaanay ku dhawaatay inay...
Wararkii ugu dambeeyey khasaaraha qaraxii B/Weyne iyo Musharax ku dhintay
Deg deg Maamul goboleedyo Balanta Uga Baxay Farmaajo, Mucaaradka oo qaaday...
Wararkii ugu dambeeyey ee loolanka doorashada kursiga HOP#106 + Sawirro